Ny fomba tsara indrindra hanesorana ny kongona avy amin'ny alika (ary ny ratsy indrindra koa) | Tontolo alika
Ahoana ny fanesorana ny kongona amin'ny alika
Susana godoy | | aretina
Ny fanesorana ny kongona avy amin'ny alika dia mety hivadika nofy ratsy. Mihoatra noho ny zava-drehetra satria ireo katsentsitra ireo dia mpampita ny aretina isan-karazany ary noho izany dia tsy maintsy mihetsika haingana araka izay tratra isika. Na ho an'ny fahasalaman'ny biby fiompinay ary koa ny anay. Satria tsy maintsy sorohintsika izy ireo mba tsy hihantona sy hanaikitra, satria araka ny fantatrareo dia mihinana ny ran'ireo volonay volo izy ireo.
Indraindray dia mandeha izay tiantsika na tsia. Izay azontsika atao ihany no sorohy amin'ny fomba any an-trano, miaraka amin'ny toro-hevitra maromaro avelanay anao anio ary mazava ho azy, miaraka amin'ny hevitra maro hafa ka ny fanesorana ny kongona avy amin'ny alika dia haingana kokoa ary mahomby kokoa, izay no tena ilaintsika.
1 Ny fomba tsara indrindra hanesorana ny kongona avy alika
2 Ahoana ny fomba fanesorana ny tick amin'ny tweezers
3 Fomba fanamboarana namboarina hanesorana ny tapakila izay tsy mandeha tsara
3.1 Oliva menaka
3.3 Asio hatsiaka na hafanana
3.4 Esory amin'ny rantsan-tananao
4 Torohevitra hisorohana ny alikanao tsy hahazo ny kongona
4.1 Collars na pipettes
4.2 Zahao matetika foana ny volony
4.3 Sorohy ny faritra misy ahidratsy mavesatra na zavamaniry lava
Ny fomba tsara indrindra hanesorana ny kongona avy alika
Tweezers manala tsikitsiky...
NatureAqua Hook ho an'ny ...
Ny fomba tsara indrindra anesorantsika ny tapakila dia ny fampiasana ireo tweezers manokana ho azy ireo. Eny, vokatra natao hanalana azy ireo amin'ny fomba milamina sy mazava kokoa izy io. Ity karazana fitaovana ity dia mety hisy famaranana maromaro, samy misy tendrony tsara na karazana farango. Satria tsy mitovy ny kongona rehetra, dia tena kely habe amin'ny hafa izay lehibe kokoa. Tandremo anefa, satria ankoatry ny haben'ny bibikely dia hifanaraka amin'ny fotoana niraisan'ny tsiranoka amin'ny hoditry ny biby ihany koa ireo clamp ireo. Satria sarotra kokoa indraindray ny manaisotra azy ireo. Ho an'izany rehetra izany, hitantsika ny fomba tsy hitovizan'ny famaranana ny clamp.
Fa amin'izy rehetra dia matetika kokoa ny miresaka momba ireo tweezers manana farango roa sy karazana kitrokely. Satria izy ireo no hanampy antsika amin'ny olantsika ankehitriny. Tsy maintsy entintsika manakaiky ny hoditry ny alika izy ary atsofohy mandra-pahazoantsika maka ny lohan'ilay bibikely.
Rehefa ananantsika izany dia mila mivily kely sy misintona miakatra isika mba hanasarahana azy amin'ny tenan'ny biby fiompintsika.
Ahoana ny fomba fanesorana ny tick amin'ny tweezers
Raha tsy manana tweezers manokana ianao dia marina fa hanao ilay asa ilainay koa ireo tweezers. Indrindra ireo izay mifarana amin'ny teboka iray. Izahay izao dia mitady ny marika, manasaraka ny volon'ilay biby. Tsy maintsy tsiahivina fa ny bika dia manana vatana somary lehibe raha oharina amin'ny loha ary ny tena tsy maintsy esorintsika dia ity. Satria indraindray raha tsy ataontsika tsara dia afaka mizara ny vatana isika ary mampitoetra ny loha ao anaty hoditry ny alikantsika.
Izao no fotoana hanaovana apetraho amin'ny akaiky sy akaiky ny hoditra ny fehin-kibo, manandrana mihazona ny lohan'ilay katsentsitra. Rehefa manana izany ianao dia tsy maintsy manintona fa tsy miverina, satria mino ny maro satria mety ho tapaka. Mila manana fanerena iray ianao amin'ity hetsika ity, satria amin'ity, ity no marika avoaka noho ny tahotra ny fahatapahana. Amin'ity tranga ity dia tsy mila manodina ny clamp ianao fa esory mafy fotsiny araka ny efa noresahintsika teo.
Fomba fanamboarana namboarina hanesorana ny tapakila izay tsy mandeha tsara
Ny menaka oliva dia iray amin'ireo fanasitranana ao an-trano amin'ny tanjona maro. Amin'ity tranga ity dia betsaka ihany koa ny resaka momba azy. Satria raha mametraka laginy vitsivitsy amin'ny marika isika dia sempotra izy ary ho setrin'io fotoana io dia hasehony amin'ny lohany izay mila esorintsika. Handatsaka vongan-drano ianao ary miandry anao hanaisotra azy amin'ny tweezers.
Ny zava-mitranga dia na dia navotsotra aza ny tapakila, dia hataony izany amin'ny alàlan'ny fanafody miverina izay lasa ao amin'ny vatan'ilay biby, izay mety hiteraka aretina sy areti-mifindra raha voan'ny otrik'aretina izany.
Izy io dia ampiasaina ho toy ny famonoana otrikaretina amin'ilay faritra nisy ilay izy. Tandremo anefa, vitsivitsy fotsiny amin'ireo nilatsaka azy mba hijanonan'ny aretina ny hoditry ny alika. Marina fa ampiasaina miaraka amin'ny menaka oliva koa izy io. Satria ity, araka ny efa noresahintsika, dia handentika ny tapakila ary koa, hivezivezy tsara kokoa izy io mba hanesorana azy, raha ny alikaola kosa no hanadio sy hikarakara ny alikanay. Saingy mety ho asa lava kokoa noho ny nandrasana izany.
Asio hatsiaka na hafanana
Iray amin'ireo vahaolana malaza indrindra ny fanesorana ny kongona amin'ny alàlan'ny fampiharana ny hafanana sy ny hatsiaka. Amin'ny lafiny iray, mampidi-doza ny mitondra loharano hafanana amin'ny hoditry ny biby fiompintsika. Satria misy karazana hetsika dia mety hanenina noho ny fahasimbana lehibe isika. Fa ny an'ny hafa, na ny hatsiaka na ny hafanana tafahoatra dia vao mainka hampiorina ny hoditra ny tondro hialana amin'ny loharano toy izany. Izany dia vao mainka mahita azy io mifamatotra kokoa ary afaka manasarotra ny asantsika.
Esory amin'ny rantsan-tananao
Impiry ianao no naheno azy na nahita azy akory? Teknika malaza iray hafa ny fanesorana ny kongona amin'ny alika amin'ny rantsan-tànanao. Tsy misy zavatra mety ho lavitra amin'ny fahamarinana. Hatramin'ity tranga ity, ny Ny fikasihana azy ireo amin'ny tananao dia mety hahatonga azy ireo hanaikitra antsika ary toy izany dia mandalo aretina sasany isika, satria ny manaikitra dia tsy miteraka fanaintainana ary tsy ho hitanay izany. Ho fanampin'ny zava-misy fa latsaka ao anaty fahadisoana isika fa rehefa esorina dia averimberina ny tantaran'ny tsy fihazonana ny loha ary mijanona ao amin'ny vatan'ilay biby izany. Noho izany, na aiza na aiza no itodihanao azy dia tsy tokony hatao io fomba io.
Torohevitra hisorohana ny alikanao tsy hahazo ny kongona
Collars na pipettes
Araka ny fantatsika tsara, ny rojo dia tonga lafatra mba hisorohana an'io karazana olana io. Raha efa misy dia mampihena azy ary raha tsy izany dia manakana noho ny asany. Fa tsara kokoa ny manatona mpitsabo biby mba hahitana izay mety indrindra amin'ny biby fiompinao. Tokony apetrakao ao aorin'izy ireo ny pipettes, any amin'ny faritra tsy azo milelaka azy ireo ary miaraka amin'izany dia hanana fiarovana mihoatra ny iray volana amin'ny tavy ianao.
Zahao matetika foana ny volony
Natao ho an'ny alika rehetra io fa indrindra ho an'ireo lava volo. Noho izany, isaky ny mivoaka ianao dia azonao atao ny manara-maso azy, miaraka amin'ny fanosotra volo tsara, ohatra. Mazava ho azy, raha mahita marika isika rehefa manamarina dia tsy maintsy esorintsika eo noho eo. Efa fantatrao fa ny haingana dia tsara kokoa, ho an'ny fanarahana fa koa hisorohana ny olana any aoriana. Tsarovy izany ny faritra tokony hijerenao indrindra dia ny sofina, armpits na rantsantanana sy tongotra ary koa ny rambony.
Sorohy ny faritra misy ahidratsy mavesatra na zavamaniry lava
Marina fa tsy fantatsika mihitsy hoe aiza no hahitantsika ireo katsentsitra ireo. Saingy azontsika atao ny misoroka faritra somary sarotra kokoa ary aiza izy ireo no hahazo aina kokoa, toy ny faritra feno ahi-dratsy. Tsy mitovy ny mamakivaky ireo toerana ireo noho ny amin'ny alalàn'ny iray miaraka amin'ny bozaka manicured. Na dia araka ny filazantsika azy aza dia tsy afaka manalavitra azy ireo 100% foana isika.
Araka ny efa noresahintsika, ny fanesorana ny kongona amin'ny alika dia tsy asa mora foana, fa tsy maintsy ataontsika haingana araka izay tratra. Satria io fomba io ihany no hanakanantsika azy ireo tsy hihinana ny rànanao sy tsy hamindra aretina izay mety ho matotra tokoa amin'ny tranga sasany. Matetika kokoa ny fifanarahana amin'izy ireo na amin'ny lohataona na amin'ny fahavaratra noho ny hafanana. Ankoatr'izay dia manana dingana 4 amin'ny tsingerim-piainany izy ireo, mandra-pahatongan'ny fahatongavan'olon-dehibe, ka hiteraka olana amin'ny fotoana fohy sy maharitra.
Ka noho izany dia tsara kokoa ny mijery ny alikantsika isan'andro, indrindra rehefa efa tany ivelany izany. Ny fikosehana tsara sy ny fifehezana ireo faritra manan-danja amin'ny vatanao toy ny sofina na ny tongotra dia zava-dehibe. fampiasana miaraka amin'ny tweezera foana mba hanesorana ny kongona fa tsy amin'ny tananao mihitsy. Na izany aza, tokony hiaro tena amin'ny fonon-tanana ianao mba tsy hanaikitra anao. Tokony hifantoka amin'ny fanesorana ny lohany foana isika, satria io no mety hiteraka fahavoazana rehetra noresahintsika. Raha esorina dia aza ariana, satria matanjaka noho ianao izy ireo. Ny zavatra tsara indrindra dia ny mametraka azy ao anaty fitoeran-javatra misy alikaola ary akatona tsara, mandra-pahatoky fa maty izy io. Hainay izao ny manala ny kongona amin'ny alika sy ny fomba hisorohana azy ireo!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » aretina » Ahoana ny fanesorana ny kongona amin'ny alika